Akụkọ Bible: Ndị Chineke Ahapụ Babilọn - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
IHE dị ka afọ abụọ agafewo kemgbe ndị Midia na ndị Peshia weghaara Babilọn. Ma lee ihe na-eme ugbu a! Ndị Izrel na-ahapụ Babilọn. Olee ụzọ ha si nwere onwe ha? Ònye hapụrụ ha ka ha laa?
Ọ bụ Saịrọs, eze Peshia. Mgbe dị anya tupu a mụọ Saịrọs, Jehova gwara onye amụma ya bụ́ Aịzaya ka o dee banyere ya, sị: ‘Ị ga-eme nnọọ ihe m chọrọ ka i mee. A ga-emeghere gị ọnụ ụzọ ámá niile ka i wee weghara obodo ahụ.’ Saịrọs mesịkwara bute ụzọ n’iweghara Babilọn. Ndị Midia na ndị Peshia si n’ọnụ ụzọ ámá ndị e ghewere oghe bata n’obodo ahụ n’ime abalị.
Ma Aịzaya onye amụma Jehova kwukwara na Saịrọs ga-enye iwu ka e wughachi Jeruselem na ụlọ nsọ ya. Saịrọs ò nyere iwu ka e mee nke a? Ee, o mere otú ahụ. Nke a bụ ihe Saịrọs gwara ndị Izrel: ‘Laanụ Jeruselem ka unu wuo ụlọ nsọ Jehova, bụ́ Chineke unu.’ Ọ bụkwa ihe ụmụ Izrel ndị a na-ala ime.
Ma, ọ bụghị ụmụ Izrel niile nọ na Babilọn nwere ike ime ogologo njem ahụ laghachi Jeruselem. Ọ bụ ogologo njem nke dị ihe dị ka narị kilomita asatọ, ọtụtụ ha emewo agadi ma ọ bụ na-arịasi ọrịa ike nke na ha apụghị ime njem tere aka. E nwekwara ihe ndị ọzọ mere na ụfọdụ ndị alaghị. Ma Saịrọs gwara ndị na-alaghị, sị: ‘Werenụ ọlaọcha na ọlaedo na ihe ndị ọzọ nye ndị na-alaghachi iwu Jeruselem na ụlọ nsọ ya.’
N’ihi nke a, e nyere ndị Izrel na-ala Jeruselem ọtụtụ onyinye. Saịrọs nyekwara ha ọkwá na iko niile ndị ahụ Eze Nebukadneza chịkọọrọ n’ụlọ nsọ Jehova mgbe o bibiri Jeruselem. Ndị ahụ nwere ọtụtụ ihe ndị ha ga-ebu laa.
Mgbe ha mere njem ihe dị ka ọnwa anọ, ndị Izrel ahụ ruru Jeruselem n’ezi oge. Ọ bụ naanị afọ iri asaa gaferela kemgbe e bibiri obodo ahụ, ala ahụ tọgbọkwara n’efu n’enweghị mmadụ ọ bụla nọ na ya. N’agbanyeghịkwa na ndị Izrel alọtawo n’ala ha ugbu a, ha ga-enwe ihe isi ike ụfọdụ, dị ka anyị ga-amụ banyere ya n’akụkọ nke na-esonụ.
Aịsaịa 44:28; 45:1-4; Ezra 1:1-11.
Dị ka e gosiri na foto a, gịnị ka ụmụ Izrel na-eme?
Olee otú Saịrọs si mezuo amụma Jehova buru site n’ọnụ Aịzaya?
Gịnị ka Saịrọs gwara ndị Izrel na-enweghị ike ịlaghachi Jeruselem?
Gịnị ka Saịrọs nyere ndị Izrel ka ha buru laa Jeruselem?
Oge hà aṅaa ka o were ụmụ Izrel ịlaru Jeruselem?
Afọ ole gafeworo kemgbe a hapụrụ ala ahụ n’enweghị onye bi ya?
Gụọ Aịsaịa 44:28 na 45:1-4.
Olee otú Jehova si mesie ya ike na amụma ahụ e buru banyere Saịrọs ga-emezurịrị? (Aịsa. 55:10, 11; Rom 4:17)
Gịnị ka amụma Aịzaya buru banyere Saịrọs na-egosi banyere ikike Jehova Chineke nwere ikwu ihe ga-eme n’ọdịnihu? (Aịsa. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pita 1:20)
Gụọ Ezra 1:1-11.
Site n’ịgbaso ihe nlereanya nke ndị ahụ na-enweghị ike ịlaghachi Jeruselem, olee otú anyị pụrụ isi mee ka “aka” nke ndị banyere n’ozi oge niile “sikwuo ike”? (Ezra 1:4, 6; Rom 12:13; Kọl. 4:12)